Fampahalalana momba ny fiarovana ny angon-drakitra, fampiasana cookie ary fandavana - www.amp-cloud.de
Fiarovana data, cookies ary andraikitra
Manova ny fiarovana ny angona:
Ampiasao ity bokotra manaraka ity mba hanokafana ny lahatsoratra naoty momba ny fampiasana cookies, azonao ampiasaina hanovana ireo fikirakirana fiarovana ny angona mifandraika amin'izany.
Ovay ny toe-javatra hampiasana cookie
Andraikitra momba ny atin'ny www.amp-cloud.de:
Ny atin'ny pejin'ny www.amp-cloud.de dia noforonina tamim-pitandremana. Tsy omena antoka ny fahamariahana, ny fahafenoana ary ny lohahevitry ny atiny. Amin'ny maha mpanome tolotra serivisy anao, ny andraikitra araky ny § 7 Andininy 1 TMG amin'ny atiny ao amin'ny pejin'ny www.amp-cloud.de dia mihatra mifanaraka amin'ny lalàna ankapobeny. Araka ny §§ 8 hatramin'ny 10 TMG, na izany aza, tsy misy adidy amin'ny maha mpanome tolotra serivisy hanara-maso ny fampahalalana avy amin'ny antoko fahatelo na hitahiry na hanadihady ny toe-javatra izay manondro asa tsy ara-dalàna. Ny adidy amin'ny fanesorana na fanakanana ny fampiasana fampahalalana mifanaraka amin'ny lalàna ankapobeny dia tsy voakitika. Na izany aza, ny tompon'andraikitra amin'ity fanovozan-kevitra ity dia azo atao faran'izay ela indrindra hatramin'ny fotoana nahalalantsika fa misy fandikan-dalàna manokana. Raha vantany vao fantatsika ny fanitsakitsahana lalàna mifanaraka amin'izany dia hesorina faran'izay haingana ity atiny ity.
Adidy momba ny rohy amin'ny www.amp-cloud.de:
Ny tolotra avy amin'ny www.amp-cloud.de dia mety misy rohy mankamin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo ivelany izay tsy misy akony eo amin'ny mpandraharaha ny www.amp-cloud.de. Noho izany tsy misy antoka omena an'ity atiny ivelany ity. Ny mpamatsy na ny mpandrindra ny pejy tsirairay avy dia tompon'andraikitra amin'ny atin'ny pejy mifandray hatrany. Raha mahatsapa ny fandikan-dalàna isika, dia hesorina faran'izay haingana ireo rohy toy izany.
Ny atiny sy ny asa noforonin'ny mpandraharaha tranokala ao amin'ny pejin'ny www.amp-cloud.de dia iharan'ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona Alemanina. Ny fanaovana kopia, fanodinana, fizarana ary karazana fanararaotana hafa ivelan'ny fetran'ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona dia mitaky fanekena an-tsoratra avy amin'ny mpanoratra, mpamorona na mpandraharaha. Ny fisintomana sy ny dika mitovy amin'ity tranonkala ity dia avela hampiasaina irery. Ny karazana fampiasana ara-barotra rehetra dia voarara raha tsy mahazo alalana mazava avy amin'ny mpanoratra marina! Raha tsy ny mpamorona tranokala no namorona ny atiny tao amin'ny pejy www.amp-cloud.de, dia zahana ny zon'ny mpamorona ny antoko fahatelo. Ho an'ity tanjona ity dia voamarika toy izany ny atin'ny antoko fahatelo. Raha toa ka miharihary ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona, dia mangataka aminao izahay mba hampandre anay araka izany. Raha mahatsapa ny fandikan-dalàna isika, dia hesorina faran'izay haingana ny atiny toy izany.
Fiarovana data raha vao jerena:
Ity fampahalalana manaraka ity dia manome topy maso kely momba ny zava-mitranga amin'ny data-nao manokana rehefa mitsidika ny tranokalanay ianao. Ny angon-drakitra manokana dia angon-drakitra rehetra ahafantarana anao manokana. Ny fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fiarovana ny angona dia azo jerena ao amin'ny fanambarana fiarovana anay voatanisa etsy ambany amin'ity lahatsoratra ity.
Fanangonana data ao amin'ny tranokalanay
Iza no tompon'andraikitra amin'ny fanangonana angona eto amin'ity tranonkala ity?
Ny fikirakirana angon-drakitra amin'ity tranonkala ity dia ataon'ny mpandraharaha tranokala. Azonao atao ny mahita ny antsipirian'ny fifandraisan'izy ireo ao amin'ny tranokalan'ity tranonkala ity.
Ahoana no fanangonana ny angon-drakitrao?
Amin'ny lafiny iray, angonina ny angon-drakitrao rehefa mampita izany aminay. Ity dia mety ho angon-drakitra ampidirinao amin'ny endrika fifandraisana, ohatra.
Ny data hafa dia voarakitra ho azy avy amin'ny rafitra IT anay rehefa mitsidika ny tranokala ianao. Ity dia angona teknika indrindra (oh: Internet browser, operating system na ora fijerin'ny pejy). Nangonina ho azy ity angona ity raha vantany vao miditra amin'ny tranokalanay ianao.
Inona no ampiasainay ny angon-drakitrao?
Azonao atao ny mandray vaovao momba ny fiaviany, ny mpandray ary ny tanjon'ny angon-drakitrao manokana voatahiry maimaimpoana amin'ny fotoana rehetra. Azonao atao ihany koa ny mangataka ny fanitsiana, fanakanana na famafana an'ity data ity. Azonao atao ny mifandray aminay amin'ny fotoana rehetra amin'ny adiresy voalaza ao amin'ny fampandrenesana ara-dalàna raha manana fanontaniana hafa momba ny fiarovana ny angona ianao. Azonao atao ihany koa ny mametraka fitoriana amin'ny fahefana mpanara-maso mahefa.
Fitaovana famakafakana sy fitaovan'ny antoko fahatelo
Rehefa mitsidika ny tranokalanay ianao dia afaka tombanana amin'ny statistika ny fitondran-onanao onja. Izany dia atao indrindra amin'ny cookies sy ireo antsoina hoe programa fandalinana. Ny fihetsika ataonao dia matetika no amakafaka amin'ny fomba tsy fantatra anarana; Ny fihetsika fitetezam-paritra dia tsy azo averina aminao. Azonao atao ny manohitra an'ity famakafakana ity na misoroka azy amin'ny alàlan'ny tsy fampiasana fitaovana sasany. Azonao atao ny mahita fampahalalana amin'ny antsipiriany momba an'io amin'ny fanambarana fiarovana ny angon-drakitra manaraka.
Azonao atao ny manohitra an'io fanadihadiana io. Hampahafantatra anao izahay momba ny mety hisian'ny fanoherana amin'ity fanambarana fiarovana ny angona ity.
Fampahalalana ankapobeny sy fampahalalana tsy maintsy atao:
Ireo mpandraharaha ity tranonkala ity dia mihevitra ny fiarovana ny angon-drakitrao manokana. Izahay dia karakarainay tsiambaratelo ary arakaraka ny lalàna momba ny fiarovana ny angon-drakitra sy ity fanambarana fiarovana ny angona ity.
Rehefa mampiasa an'ity tranonkala ity ianao dia angona isan-karazany manokana no angonina. Ny angon-drakitra manokana dia angona izay hahafantarana anao manokana. Ity fanambarana fiarovana ny angona ity dia manazava hoe inona ny angona angoninay ary inona no ampiasainay azy. Izy io koa dia manazava ny fomba sy ny antony anaovana izany.
Tianay ny manamarika fa ny fandefasana data amin'ny alàlan'ny Internet (ohatra: rehefa miresaka amin'ny alàlan'ny mailaka) dia mety hanana banga amin'ny fiarovana. Tsy azo atao ny miaro tanteraka ny angona amin'ny fidiran'ny antoko fahatelo.
Fanamarihana momba ny vatana tompon'andraikitra
Ny rafitra tompon'andraikitra amin'ny fikirakirana data amin'ity tranonkala ity dia:
Ny rafitra tompon'andraikitra dia ny olona voajanahary na ara-dalàna izay, irery na miaraka amin'ny hafa, manapa-kevitra amin'ny tanjona sy ny fomba fanodinana angona manokana (ohatra anarana, adiresy mailaka, sns.).
Fanesorana ny fanekenao amin'ny fikirakirana ny angona
Hetsika fanodinana angona maro no tsy azo atao raha tsy amin'ny alalanao mazava. Azonao atao ny misintona ny fanekenao amin'ny fotoana rehetra. Mailaka tsy ara-potoana ho antsika dia ampy. Ny maha ara-dalàna ny fanodinana angon-drakitra natao talohan'ny fanafoanana dia mijanona tsy misy fiatraikany amin'ny fanafoanana.
Zon'ny antso amin'ny fahefana mpanara-maso tompon'andraikitra
Raha sendra misy fanitsakitsahana ny lalàna momba ny fiarovana ny angon-drakitra dia manan-jo hametraka fitoriana amin'ny manam-pahefana mahefa ny olona voakasik'izany. Ny fahefana mpanara-maso mahefa amin'ny resaka fiarovana angon-drakitra dia ny tompon'andraikitra mpiaro ny angon-drakitry ny fanjakana federaly misy ny orinasanay Ny lisitry ny tompon'andraikitra fiarovana ny angon-drakitra sy ny antsipirian'ny fifandraisan'izy ireo dia azo jerena amin'ireto rohy manaraka ireto: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Manan-kery amin'ny fampidinana data
Azonao atao ny manana angon-drakitra izay zahanay mandeha ho azy noho ny fanekenao na amin'ny fanatanterahana ny fifanarahana natolotra anao na tamin'ny antoko fahatelo tamina endrika mahazatra, azo vakina amin'ny masinina. Raha mangataka ny famindrana mivantana ny data ianao amin'olon-kafa tompon'andraikitra, dia ho vita izany raha azo atao ara-teknika izany.
Fampahalalana, fanakanana, famafana
Ao anatin'ny sehatry ny fepetra napetraky ny lalàna manan-kery, manan-jo hanana fampahalalana maimaim-poana ianao momba ny angon-drakitrao manokana, ny fiaviany sy ny mpandray azy ary ny tanjon'ny fikirakirana ny angon-drakitra ary, raha ilaina, zony hanitsy, hanakana na hamafa ireo angona ireo. Azonao atao ny mifandray aminay amin'ny fotoana rehetra amin'ny adiresy voalaza ao amin'ny fampandrenesana ara-dalàna raha manana fanontaniana hafa momba ny antontam-data ianao.
Fanoherana ny mailaka dokam-barotra
Izahay izao dia manohitra ny fampiasana ny angon-drakitra mifandraika navoaka ho ampahany amin'ny adidy tsy maintsy andefasana dokambarotra sy fampahalalana tsy ampoizina. Ireo mpandraharaha ao amin'ny pejy dia manana zon'izy ireo handray andraikitra ara-dalàna raha misy ny fandefasana fampahalalana dokambarotra tsy ampoizina, toy ny mailaka spam.
Fanangonana data ao amin'ny tranonkalantsika:
Ny sasany amin'ireo pejin'ny Internet dia mampiasa cookies antsoina hoe cookies. Ny cookies dia tsy manimba ny solosainao ary tsy misy viriosy. Ny cookies dia manamboatra ny tolotra ataonay ho an'ny mpampiasa, mahomby kokoa ary azo antoka kokoa. Cookies dia rakitra an-tsoratra kely izay voatahiry ao amin'ny solo-sainanao ary voatahiry amin'ny tranokalanao.
Ny ankamaroan'ny cookies ampiasainay dia antsoina hoe "cookies cookies". Hofafana ho azy ireo aorian'ny fitsidihanao. Ny cookies hafa dia mijanona ao amin'ny fitaovanao mandra-pamao azy ireo. Ireo cookies ireo dia ahafahantsika mamantatra ny browser-nao amin'ny fotoana hitsidihanao azy.
Azonao atao ny mametraka ny browser-nao mba hampahafantarina anao ny momba ny fametrahana cookies ary ny cookies ihany no avelanao amin'ny tranga tsirairay, esory ny fanekena cookies ho an'ny tranga sasany na amin'ny ankapobeny, ary ampandehano ny famafana automatique ny cookies rehefa manidy ny browser ianao. Raha tapaka ny cookies dia azo ferana ny fiasan'ity tranonkala ity.
Ny cookies izay takiana amin'ny fanatanterahana ny dingan'ny fifandraisana elektronika na ny fanomezana asa sasany ilainao (ohatra ny asan'ny fiantsenana miantsena) dia arakaraka ny And. 6 Para. 1 lit. f voatahiry GDPR. Ny mpikirakira tranonkala dia manana tombony ara-dalàna amin'ny fitehirizana cookies ho an'ny fanomezana serivisy tsy misy hadisoana ara-teknika. Raha toa ka voatahiry ny cookies hafa (ohatra cookies amin'ny famakafakana ny fitondran-onjao) dia tsaboina tsirairay ireo ao anatin'ity fanambarana fiarovana data ity.
Sokajy cookie "Function"
Cookies ao amin'ny sokajy "Function" dia miasa fotsiny ary ilaina amin'ny fampiasana ny tranokala na fampiharana asa sasany. Ireo mpanome an'ity sokajy ity dia tsy azo esorina.
Sokajy cookie "fampiasana"
Cookies ao amin'ny sokajy "Fampiasana" dia avy amin'ireo mpamatsy izay manome fampiasa na votoaty sasany, toy ny fiasa amin'ny media sosialy, atiny video, endritsoratra sns. .
Sokajy cookie "refy"
Ny cookies avy amin'ny sokajy "Fatra" dia avy amin'ireo mpamatsy afaka mamakafaka ny fidirana amin'ny tranokala (mazava ho azy fa tsy fantatra anarana). Manome topy maso ny fahombiazan'ny tranonkala sy ny fomba fivoarany. Avy amin'izany dia azo alaina ohatra ny fanatsarana ny tranokala mandritra ny fotoana maharitra.
Sokajy cookie "Famatsiam-bola"
Ny cookies avy amin'ny sokajy "Financing" dia avy amin'ireo mpamatsy tolotra izay manome vola ny vidin'ny asa sy ny ampahany amin'ny tolotra tranonkala. Manohana ny fitohizan'ny fisian'ny tranonkala io.
Fisie log server
Manangona sy mitahiry ho azy ny mpanome tranokala amin'ny alalàn'ny rakitra lozisialy mpizara, izay ampitain'ny browser anao ho azy. Ireo dia:
Karazan-jery sy kinova fanaovan-jery
URL an'ny referrer
Anaran'ilay solosaina miditra
Fotoanan'ny fangatahan'ny mpizara
Ity data ity dia tsy atambatra amin'ny loharanom-baovao hafa.
Ity angon-drakitra ity dia voarakitra ao amin'ny And. 6 Fehintsoratra 1 lit. f GDPR. Ny mpikirakira tranokala dia liana ara-dalàna amin'ny fampisehoana tsy ara-teknika sy fanatsarana ny tranokalany - ny rakitra lozisialy server dia tokony hosoratana ho amin'izany.
Plugins Facebook (toy ny & bokotra fizarana)
Ny plugins an'ny tambajotra sosialy Facebook, mpamatsy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Etazonia, dia tafiditra ao amin'ny pejinay. Azonao atao ny mamantatra ireo plugins Facebook amin'ny alàlan'ny logo Facebook na ny bokotra "J'aime" ao amin'ny tranokalanay. Azonao atao ny mahita topimaso momba ireo plugins Facebook eto: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Rehefa mitsidika ny tranokalanay ianao, ny plug-in dia mametraka fifandraisana mivantana eo anelanelan'ny tranokalanao sy ny mpizara Facebook. Vokatr'izany dia mahazo ny fampahalalana notsidihinao tamin'ny tranokalanay tamin'ny adiresy IP ny Facebook. Raha tsindrio ny bokotra "J'aime" Facebook raha miditra ao amin'ny kaonty Facebook ianao dia azonao atao ny mampifandray ny atin'ny pejinay amin'ny mombamomba anao Facebook. Izany dia ahafahan'ny Facebook manome ny fitsidihanao ny tranokalanay amin'ny kaonty mpampiasa anao. Tianay ny manasongadina fa, amin'ny maha-mpamatsy ireo pejy anay, tsy manana fahalalana momba ny atin'ny data nampitaina na ny fampiasan'ny Facebook izahay. Afaka mahita fampahalalana bebe kokoa momba izany ianao ao amin'ny fanambarana fiarovana ny angona Facebook ao amin'ny: https://de-de.facebook.com/policy.php
Raha tsy tianao ny hahafahan'ny Facebook manendry ny fitsidihanao ny tranokalanay mankany amin'ny kaonty mpampiasa Facebook anao, azafady mivoaha avy amin'ny kaonty mpampiasa Facebook anao.
Mampiasa asan'ny Google+ ny pejinay. Ny mpamatsy dia Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Etazonia.
Fanangonana sy fanaparitahana vaovao: Afaka mampiasa ny bokotra Google+ ianao hamoahana vaovao manerantany. Ianao sy ireo mpampiasa hafa dia mahazo atiny manokana avy amin'i Google sy ireo mpiara-miasa aminay amin'ny alàlan'ny bokotra Google+. Google dia mamonjy ny fampahalalana nomenao +1 ho an'ny atiny sy ny fampahalalana momba ilay pejy hitanao rehefa tsindrio +1. Ny +1 anao dia azo aseho ho referansa miaraka amin'ny anaranao sy ny sarinao amin'ny serivisy Google, toy ny valin'ny fikarohana na amin'ny mombamomba anao Google, na amin'ny toerana hafa amin'ny tranokala sy dokam-barotra amin'ny Internet.
Google dia manoratra vaovao momba ny hetsika +1 nataonao mba hanatsarana ny serivisy Google ho anao sy ny olon-kafa. Mba hahafahana mampiasa ny bokotra Google+ dia mila mombamomba an'i Google hita maso manerantany ianao ary tsy maintsy fenoina farafaharatsiny ny anarana voafidy ho an'ilay mombamomba. Ity anarana ity dia ampiasaina amin'ny serivisy Google rehetra. Amin'ny tranga sasany, ity anarana ity dia afaka manolo anarana hafa izay nampiasanao rehefa mizara atiny amin'ny alàlan'ny kaonty Google anao. Ny mombamomba ny piraofilinao Google dia azo aseho amin'ny mpampiasa mahalala ny adiresy mailaka anao na manana fampahafantarana hafa momba anao.
Fampiasana ny fampahalalana nangonina: Ho fanampin'ny tanjona voalaza etsy ambony, ny fampahalalana omenao dia hampiasaina mifanaraka amin'ny fepetra fiarovana Google angona azo ampiharina. Google dia afaka mamoaka antontan'isa voafintina momba ny hetsika +1 an'ny mpampiasa na mampita izany amin'ireo mpampiasa sy mpiara-miombon'antoka, toa ny mpanonta, mpanao dokam-barotra na tranokala mifandray.
Fitaovana fanadihadiana sy doka:
Ity tranonkala ity dia mampiasa ny asan'ny serivisy fandinihana tranonkala Google Analytics. Ny mpamatsy dia Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Etazonia.
Google Analytics dia mampiasa ilay antsoina hoe "cookies". Ireo dia rakitra an-tsoratra izay voatahiry ao amin'ny solosainao ary ahafahana mamakafaka ny fampiasana ny tranokala. Ny fampahalalana novokarin'ny cookie momba ny fampiasanao an'ity tranonkala ity matetika dia nafindra tany amin'ny mpizara Google any Etazonia ary voatahiry ao.
Ny tahiry ny cookies Google Analytics dia mifototra amin'ny And. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Ny mpikirakira tranonkala dia manana fahalianana ara-dalàna amin'ny famakafakana ny fihetsiky ny mpampiasa mba hanatsarana ny tranokalany sy ny doka.
Navoakanay ny lahasa fanaingoana IP amin'ity tranonkala ity. Vokatr'izany, ny adiresy IP anao dia hohafohezin'ny Google ao amin'ny fanjakana mpikambana ao amin'ny Vondrona Eropeana na amin'ny fanjakana hafa nifanarahana tamin'ny fifanarahana momba ny faritra ara-toekarena eropeana alohan'ny hamindrana azy any Etazonia. Ny adiresy IP feno dia halefa amin'ny mpizara Google any Etazonia ary hofohy amin'ny tranga miavaka. Amin'ny anaran'ny mpandraharaha an'ity tranonkala ity, Google dia hampiasa ity fampahalalana ity hanombanana ny fampiasanao ny tranokala, hanangonana ny tatitra momba ny asan'ny tranokala ary hanomezana ny mpandraharaha tranokala serivisy hafa mifandraika amin'ny hetsika tranokala sy ny fampiasana Internet. Ny adiresy IP ampitain'ny browser-nao ho anisan'ny Google Analytics dia tsy hampifangaroina amin'ny data Google hafa.
Azonao atao ny misoroka ny fitehirizana ny cookies amin'ny alàlan'ny fametrahana ny rindrambaiko fitetezanao arak'izany; na izany aza, tianay ny hanasongadinana fa amin'ity tranga ity dia mety tsy ho azonao atao ny mampiasa ny asa rehetra ato amin'ity tranonkala ity amin'ny fomba feno. Azonao atao ihany koa ny manakana an'i Google tsy hanangona ny angon-drakitra ateraky ny cookie ary mifandraika amin'ny fampiasanao ny tranokala (ao anatin'izany ny adiresy IP anao) ary amin'ny fanodinana an'ity data ity amin'ny alàlan'ny fampidinana ny plug-in misy ny browser amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity ary apetaho: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Fanoherana ny fanangonana angona
Azonao atao ny manakana ny Google Analytics tsy hanangona ny angona azonao amin'ny fipihana ny bokotra etsy ambany. Mampiseho ny fampahalalana sy ny safidy fametrahana ny fampiasana cookies ity, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny "" foinao, ankoatry ny zavatra hafa, ny fanangonana ny angona ao amin'ny kaonty Google Analytics:
Asehoy ny safidy hanafoanana ny Google Analytics
Afaka mahita fampahalalana bebe kokoa momba ny fomba fitantanan'ny Google Analytics ny angon-drakitry ny mpampiasa ao amin'ny politikam-pahafantanan'i Google ianao: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Mandahatra fanodinana angona
Nanatontosa fifanarahana fanodinana angon-drakitra nifanaovana tamin'i Google izahay ary mampihatra tanteraka ny fepetra henjana omen'ny manampahefana fiarovana ny angona Alemanina rehefa mampiasa Google Analytics.
Toetra demografika ao amin'ny Google Analytics
Ity tranonkala ity dia mampiasa ny fiasa "toetra demografika" an'ny Google Analytics. Io dia ahafahana mamorona tatitra izay misy fampahalalana momba ny taona, ny miralenta ary ny tombontsoan'ny mpitsidika ny tranonkala. Ity data ity dia avy amin'ny dokambarotra mifototra amin'ny zanabola avy amin'ny Google sy angona mpitsidika avy amin'ny mpamatsy antoko fahatelo. Ireo data ireo dia tsy azo omena olona manokana. Azonao atao ny mamono io asa io amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fikirana doka ao amin'ny kaonty Google anao na mandrara amin'ny ankapobeny ny fanangonana ny angon-drakitrao amin'ny Google Analytics araka ny voalaza ao amin'ny fizarana "Fanoherana ny fanangonana data". Ity tranonkala ity dia mampiasa ny fiasa "toetra demografika" an'ny Google Analytics. Io dia ahafahana mamorona tatitra izay misy fampahalalana momba ny taona, ny miralenta ary ny tombontsoan'ny mpitsidika ny tranonkala. Ity data ity dia avy amin'ny dokambarotra mifototra amin'ny zanabola avy amin'ny Google sy angona mpitsidika avy amin'ny mpamatsy antoko fahatelo. Ireo data ireo dia tsy azo omena olona manokana. Azonao atao ny manafoana io asa io amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fikirana doka ao amin'ny kaonty Google anao na mandrara amin'ny ankapobeny ny fanangonana ny angon-drakitra Google Analytics araka ny voalaza ao amin'ilay teboka "fanoherana ny fanangonana data".
Ity tranonkala ity dia mampiasa Google AdSense, serivisy fampidirana dokambarotra avy amin'ny Google Inc. ("Google"). Ny mpamatsy dia Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Etazonia.
Google AdSense dia mampiasa ilay antsoina hoe "cookies", rakitra an-tsoratra izay voatahiry ao amin'ny solo-sainanao ary mamela ny famakafakana ny fampiasana ny tranokala. Google AdSense koa dia mampiasa ilay antsoina hoe fanilo web (sary tsy hita maso). Ireo fanilo tranonkala ireo dia azo ampiasaina hanombanana ny fampahalalana toy ny fifamoivoizana ataon'ny mpitsidika amin'ireo pejy ireo.
Ny fampahalalana novokarin'ny cookies sy ny jiro web momba ny fampiasana an'ity tranonkala ity (ao anatin'izany ny adiresy IP anao) sy ny fandefasana ireo endrika dokam-barotra dia ampitaina sy ampirimin'i Google amin'ny mpizara any Etazonia. Ity fampahalalana ity dia azon'i Google ampitaina amin'ireo mpiara-miasa amin'i Google nifanaraka. Na izany aza, Google dia tsy hanakambana ny adiresy IP anao amin'ny angona hafa voatahiry momba anao.
Ny tahiry ny cookies AdSense dia mifototra amin'ny And. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Ny mpikirakira tranonkala dia manana fahalianana ara-dalàna amin'ny famakafakana ny fihetsiky ny mpampiasa mba hanatsarana ny tranokalany sy ny doka.
Azonao atao ny misoroka ny fametrahana cookies amin'ny alàlan'ny fametrahana ny rindrambaiko fitetezana arak'izany; na izany aza, tianay ny manasongadina fa amin'ity tranga ity dia mety tsy ho azonao atao ny mampiasa ny asa rehetra ato amin'ity tranonkala ity amin'ny fomba feno. Amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity dia manaiky ny fanodinana ny angona angoninao momba anao Google amin'ny fomba voalaza etsy ambony sy ny tanjona voalaza etsy ambony.
Plugins sy fitaovana:
Ity pejy ity dia mampiasa ireo antsoina hoe endritsoratra amin'ny tranonkala, izay omen'i Google, ho fampisehoana fanamiana endritsoratra. Rehefa miantso pejy iray ianao, dia ampidirin'ny mpitety tranonao ao anaty tranokala fitehirizanao ny fontsiny takiana mba hampisehoana tsara ny lahatsoratra sy ny endritsoratra.
Ho an'ity tanjona ity dia tsy maintsy mifandray amin'ny mpizara Google ny browser ampiasainao. Izany dia manome fahalalana an'i Google fa niditra tamin'ny alàlan'ny adiresy IP anao ny tranokalanay. Ny fampiasana Google Web Fonts dia natao mba hahaliana ny fampisehoana fanamiana sy manintona ny tolotra an-tserasera anay. Ity dia maneho fahalianana ara-dalàna ao amin'ny dikan'ny And. 6 Para. 1 lit.f GDPR.
Raha tsy manohana endri-tranonkala ny tranokalanao, dia endritsoratra mahazatra no hampiasain'ny solo-sainao.
Ny fampahalalana misimisy momba ny Google Web Fonts dia hita ao amin'ny https://developers.google.com/fonts/faq ary ao amin'ny politikan'ny tsiambaratelo Google: